Author Topic: Samjhana Budhathoki - dancer and model (Read 21582 times)
sam.jpg (78.32 kB, 960x540 - viewed 440 times.)
samjhana.jpg (34.04 kB, 384x512 - viewed 1688 times.)
सम्झना किन देखिन्छिन् सेक्सी?
उनको नृत्यमा भुतुक्कै हुनेहरू थुपै्र छन्। उनको नृत्यको एक झड्का हेर्ने नेपालमा मात्र होइन अझ बढी त नेपालबाहिर रहेका नेपाली मरिहत्ते हाल्छन्। त्यसैले त देशबाहिर हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने कलाकारहरूको टोलीमा उनको नाम छुट्दैन।
उनी अर्थात् सम्झना बुढाथोकी। सम्झना विशेषतः लोकगीतहरूको म्युजिक भिडियोमा एकछत्र राज गर्न सफल भएकी छिन्। शरीरको लचकता अनि अनुहारको 'हाउभाउ'ले सम्झना दर्शकहरूमाझ परिचित छिन्। 'गीतको भाव र मागअनुसार नृत्य प्रस्तुत गर्न सक्ने गजबको शैली छ उनमा। त्यसैले सम्झना चर्चामा छिन्,' उनलाई आफ्नो गीतमा नृत्य गराउने गायक–गायिकाहरू यसै भन्छन्।
अब आफू मात्र नाचेर भएन, आफूजस्तै नृत्य विधामा निपुण नृत्याङ्गनाहरू जन्माउने योजनामा लागेकी छिन् सम्झना। यसैक्रममा सम्झनाले काठमाडौंको बागबजारमा 'गु्रप वन क्रियसन' नामक नृत्य स्कुल सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। सम्झनाका अनुसार यो स्कुलमा नृत्य विधाका सबै आइटमको प्रशिक्षण दिइने गरिन्छ।
त्यसो त सम्झनाले नाच्दा ग्ल्यामर्सको नाममा भल्गारिटी देखिने आरोप पनि उनलाई नलागेको होइन। यो विषयमा उनले भनिन्, 'मैले नाच्दा मेरो नृत्यमा भल्गारिटी होस् भनेर नाच्दिन'। नृत्यको तालमा शरीरको लचकतामा त्यो देखिन्छ भने म के भनुँ ? तर म भल्गारिटीभन्दा पनि मेरो नृत्यमा बढी सेक्सी हाउभाउ देखिने कुरा मान्दछु। र, भल्गारिटी अनि सेक्सी फरक हुन्। त्यसैले म सेक्सी देखिन्छु होला तर भल्गारिटी देखिन्न,' उनले दाबी गरिन्
samjhana budhathoki.jpg (279.2 kB, 1085x723 - viewed 331 times.)